SOMALITALK - MADHOODHOW
Xaggee ayuu ku Dambeeyey Madhoodhow
Maarso 27, 2006
Sannadkii 2004 waxaan akhirtayaasha uu soo tebiney arrin ku saabsan dhibaatada haysata mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan magaalada Muqdisho. Ninkaas oo magaciisa la yiraahdo Xasan Abeyle oo ku magac dheer "Madhoodhow".
Xasan Abeyle (Madhoodhow) xilligaas waxa uu caan ka ahaa isgoyska Black Sea iyo Al Baraka, isaga oo intaa feera-qaawanaa, oo garaabada jaadka cuni jirey had iyo gooraale, ciidana cantuugi jirey isaga oo marka la weydiiyo sheegan jirey in uu ciida ku qadeeyo , ciida ku quraacdo, hadana ciida ku casheeya, oogadisana ama korkiisana waxa uu marin jirey olyoyada laga daadiyo baabuurta, kuna faani jirey in aan dushiisha la taaban karin.
Hadaba waxaa laga yaabaa in dad badani is weydiiyaan, Xagee ayuu ku dambeeyey Madhoodhow.
Nasiib wanaag Madhoodhow aad ayuu hadda uga wanaagsan yahay sidii uu ahaa xilligaas. Sida ka muuqata sawirada hoose.
Xasan Abeyle (Madhoodhow) dadka ayuu hadda wacdiyaa....
Xilligaan la joogo Xasan Abeyle waxa uu xirtaa dhar, kumana qubeysto Oolyada, ciidana ma cuno. Waxaa lagu xananeeyey xarunta Sh. Cabdiraxman Macow Xaaji (ahlu kheyr ) oo ah xarun lagu xanaaneeyo dadka wax uga dhimian yihiin "Dhimirka".
Arintu si kastaba ha ahaatee waxaad arkeysaa Madhoodhow oo sita magarafoon oo dadka wacdinaya, in kasta oo marka aad aragtid aad dareemeysid in weli wax ku danbeeyaan in kasta oo uusan sidiisii hore eheyn ama aad uga wanaagsan yahay.
Xarunta dhimirka waxaa ku jirta 30 qof, halka sadax ka mid ah ay yihiin kuwo xirxiran oo aan lagu dhexdayn Karin bulshada, 27 ka kale ayaa ah dad hada ka soo reynayo sidii hore ay u ahaayeen.
Xasan Abeyle waxa uu sanadihii 80-tamaadkii ahaa Askari u shaqeynayay Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 21-aad, wuxuuna ahaa Cunto Kariye (Cook) u shaqeynayay taliyihii ciidammada qaybtaasi General Maxamed Siciid Xirsi Moorgan, waxa uu ahaa nin aad u fir-fircoonaa, balse dadweynaha deegaanka ayaa si aad ah ula yaabay ninkaasi fir-fircoonidiisa iyo qaabka uu u shaqeeyo, waxayna markiiba u bixiyeen (Madhoodhow). AKhri Halkan.... GUJI...
Qore: Muuse Maxamuud Jiisow
Faafin: SomaliTalk.com | Marso 27, 2006
Nolosha wiil Aabihiis Ingiriis ahaa oo kirishbooy ka ah Hargeysa: Magaciisu waa Nimcaan Ibraahiim Bowdan, waxa uu ku dhashay.... Akhri halkan... Guji...
Ugaas Max’ed Wali “C/llaahi hadduu ka tanaasulo saddex qodob waxaan oran lahaa
�Wafdi ka socda Talyaaniga oo ku soo fool leh Baydhabo ..
�Gacma Dheere oo ka warbixiyay howlihii nabadeynta G/Dhexe
�C/llaahi Tarabi “Haddii aad i doorataan mudo lix bilood ah
�Wafdi ka socda Beesha Caalamka oo Baydhabo soo gaaray
�Max’ed Dheere oo xirxiray Ganacsato reer Jowhar ah
�60-qof oo Soomaali tahriibayaal oo maydkooda laga xeebaha
�Geedi oo hambalyo u diray xuska Maalinta 8-da Maarso..
�Baaq Abaaraha Soomaaliya Heysta
�Kulan dhexmaray Cabdulaahi Yusuf iyo Ururka Al-Islaax
�Dad rayad ah oo gumaysiga Itoobiya laayay...
iyo Warar GooGoos ah ka akhi halkan.... Guji... March 8
Max’ed Dheere oo Warqad ka helay Madaxweyne C/laahi Yuusuf..
�Guddigii taakuleynta oo beeniyay hadalkii Muuse Suudi...
�Garoowe oo lagu daadiyay waraaqo golaha wakiilada looga..
�Ciidamadii ku xareysnaa Xerada Kongo oo kusii jeeda Waajid
�Kulankii Baarlamaanka oo looga dooday ajandayaal dhawr ah
�Beelihii ku dagaalamay Yamaarugle oo isa soo horfariistey
�Beelaha Faarax Garaad oo Dib u eegaya hoggaanka PL
�Baaq Nabadeed: Beelihii ku dagaalamay Yamaarugle...
iyo Warar GooGoos ah ka akhri halkan... Guji... Mar 7